Shiinaha Letter bir ah jaamaha dhoofisaa iyo Product | Evergreen
Chenille Waraaqaha / Astaantooda
jaamaha lagu daabacay
calaamad-xidhkii / qoraalka
Waa maxay calaamadaha daabacan?
Dhismaha 2aad, Lambar 5, Guxia Warshadaha 2nd Rd., Shipai Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Letter bir ah jaamaha
jaamaha Chenille caadi saaray in ay qurxiyaan jaakadaha Iyi ama abaal marin kooxda isboortiga. Waxay ka samaysan yihiin dun chenille ku saleysan hal ama laba lakab oo asal dareemay. isku darka A of chenille iyo daabac waxaa inta badan laga codsadaa in ay jaamaha isboortiga. Canbaha Kaarka waxaa ka go'an in tayada wax soo saarka Chenille Waraaqaha iyo Astaantooda, kaas oo si shakhsi ah kartoo sida ay door bidayso qiimaynta iyo design. jaamaha Our chenille loo dhisay iyadoo 80% dhogor idaad, 20% nylon for cimri dherer ku daray ....
Jaamaha Chenille caadi saaray in ay qurxiyaan jaakadaha Iyi ama abaal marin kooxda isboortiga. Waxay ka samaysan yihiin dun chenille ku saleysan hal ama laba lakab oo asal dareemay. Isku darka A of chenille iyo daabac waxaa inta badan laga codsadaa in ay jaamaha isboortiga. Canbaha Kaarka waxaa ka go'an in tayada wax soo saarka Chenille Letter s iyo Astaantooda, kaas oo si shakhsi ah kartoo sida ay qiimaynta door bidayso iyo design. Jaamaha Our chenille loo dhisay iyadoo 80% dhogor idaad, 20% nylon for cimri dherer ku daray. Sababtoo ah halka ay doorashada dun gaar ah, jaamaha waxaa lagu gartaa ay fiican muuqaalka 3D cad.
digitizing ayaad jeceshahay waxaa laga heli karaa noo ogolaaday inuu shaabaho ama caadadiisu-abuuro warqado Iyi per codsigaaga. Haddii aad warqad waa aad dugsiga, shirkadaha waaweyn ama adiga uun, aynu u abuuri karaan.
Previous: jaamaha jaakada
Next: jaamaha Letter for jaakadaha
Chenille Letter Baro
Chenille Waraaqaha Baro
Chenille Patch Waraaqaha
Iron On Chenille Letter Baro
Waraaqaha Chenille Baro
Chenille jaamaha Ooyintii
jaamaha Custom for jaakadaha
jaamaha Custom Jaakadda
Chenille caadadii balastar
Personalized athletic chenille patch
© Copyright - 2010-2019: Dhamaan Reserved Rights. Talooyin - Products Featured - Sitemap - Mobile Site
Chenille Varsity Letter , Chenille Varsity Letter T Patch , Chenille Letter Baro, daabac Badge, Jillaab Oo Loop-xidhkii Badge, Chenille Patch Waraaqaha , All Products - 粤ICP备18108880号-1